MODA | Article Detail | Staycation သွားတဲ့အခါ အမိုက်ဆုံးဖြစ်နေဖို့ ဘယ်လို Outfit တွေဝတ်ရမလဲ
အခုလိုအချိန်တွေ Covid-19 သာမရှိရင် ခရီးတွေထွက်လိုက်၊ အပြင်တွေသွားလိုက်နဲ့ ဖလန်းဖလန်းလုပ်လို့ရမှာနော်။ အခုတော့ Covid Cases တွေကဆက်ရှိနေဆဲမို့ အနားယူအပန်းဖြေချင်တဲ့ ကိုကိုမမတို့အတွက် သူငယ်ခင်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့အတူတူ ကိုယ့်မြို့ထဲမှာပဲရှိတဲ့ နာမည်ကြီး Hotel တွေမှာ Staycation သွားနေကြတာကလည်း Trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်။ အခုလို Vacation တွေမသွားရတဲ့အခါ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကစလို့ အသက်အလတ်ပိုင်း အရွယ်တွေအထိ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Hotel Staycation တွေသွားတာက စိတ်အပန်းပြေသလို ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေး Procedure တွေကို စနစ်တကျလိုက်နာပြီး ကျပ်ကျပ်မတ်မတ် စိစစ်တဲ့ Hotel ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။
မိန်းကလေးတွေအတွက်ကလည်း Staycation သွားပြီဆိုရင် မလုပ်ဖြစ် အရာတွေထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်တာက ထိပ်ဆုံးကပါတာပေါ့။ အမိုက်စားရှုခင်းနဲ့ View တွေ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အခန်းအပြင်အဆင်တွေနဲ့ Poolside တွေက ဓာတ်ပုံမရိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဒါပေမယ့် ကင်မရာနဲ့ပဲရိုက်ရိုက်၊ ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ရိုက် ကိုယ့်ရဲ့ Staycation Outfit ကလည်း ဖက်ရှင်ကျနေဖို့အရေးကြီးတယ်လေ။ ဒါမှလည်း ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ကအားလုံးထက်ပေါ်လွင်ပြီးလှနေမှာပေါ့။ ဒီတော့ ခပ်ပွပွ စပန့်သား Pyjamas တွေဝတ်မယ့်အစား ဒီ အဝတ်အစားလေးတွေကသင့်ကို အမိုက်ဆုံးဖြစ်နေစေမှာနော်။
Bath Robe ဆိုလို့အထင်မသေးလိုက်နဲ့နော်။ Instagrammic ဆန်ဆန် Bathroom ထဲကပုံတွေရိုက်ချင်ရင် အပေါ်ကနေ Bath Robe လေးသာဝတ်ပြီး ရေချိုးခန်းမှန်မှာ စိတ်ကြိုက် Pose ပေးပေတော့။ သဘာဝဆန်သလို အထာလည်းကျတာမို့ Model တွေအများစုမှာလည်း ဒီလို Photo မျိုးကိုတွေ့ရတာနော်။
ကဲသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညဖက် အိပ်ရာလှလှလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို ပိုးသားပျော့ပျော့နဲ့ ညဝတ် Night Wears လေးတွေက အသင့်တော်ဆုံးပဲနော်။ ချစ်စရာကောင်းသလို Girls Slumber Party လို Vibe လေးကိုလည်း ရရှိစေတယ်လေ။
Hotel Staycation တွေသွားလည်း Style က မိမိုက်နေမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့မမတို့အတွက် Lounge မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အခန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ် Oversized Sweatpants လေးတွေကို Ripped Jeans လေးတွေ၊ Denim Shorts လေးတွေဝတ်၊ Cap လေးဆောင်း၊ Chunky Sneaker လေးစီးပြီး အထာကျကျ Pose ပေးလို့ရပါပြီ။
Sport Bras and Sweatpants
Sporty Style ကောင်မလေးတွေအတွက်ကလည်း Sport Bra နဲ့ Sweatpants ကရိုးရိုးလေးပေမယ့် Casually ဖက်ရှင်ကျပါတယ်။ ဒီတိုင်းရိုက်တာမပြောနဲ့ Mirror Selfie ရိုက်ရင်တောင်လှနေမှာ။ Gym ဆော့တဲ့သူတွေဆိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့အမိုက်စား Body ကိုထုတ်ကြွားလို့ရတာပေါ့။
Staycation ပဲဆိုပြီး Hotel ကို Casual Wear နဲ့ ညဝတ်အထည်တွေချည်းပဲယူမသွားနဲ့ဦးနော်။ ညဖက် Dinner စားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း Classy Style လေးနဲ့ ဆိုရင် Photo-Ready ပဲနော်။ Little Black Dress (ဒါမှမဟုတ်) Satin Slip Dress မျိုးလေးဆို အရမ်းကြီး အားထုတ်နေစရာမလိုပဲ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေမှာနော်။
ကဲအဲ့လိုနဲ့ရိုက်တာကုန်သွားပြီလားဆိုတော့ ကျန်သေးတယ်နော်။ Hotel မှာ High-Tea သွားသောက်သူလေးတွေအတွက်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ မိန်းကလေးဆန်ဆန် Day-Dreaming ဖြစ်တဲ့ Puffy Blouses လေးတွေ၊ Floral Print Dress လေးတွေနဲ့ Midi Dress လေးတွေကတော့ ဓာတ်ပုံထဲမှာ Princess လေးလို ချစ်စရာကောင်းနေစေမှာပါ။
မိန်းကလေးတွေအတွက် Shopping ထွက်ရတာထက် စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလို Shopping Center တွေ၊Mall တွေမဖွင့်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ Online Shopping လုပ်ရတာက အလိုအပ်ဆုံး စိတ်ထွက်ပေါက်ပဲမလား။ E-Commerce တွေ၊ Social Media တွေကနေ အဝတ်အစားလှလှလေးတွေ၊ ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်လှလှလေးတွေတွေ့ရင် မိန်းကလေးတိုင်း လိုချင်ကြတာချည်းပဲလေ။ အဲ့လိုလျှောက်ကြည့်ရင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေတွေ့တော့စိတ်မထိန်းနိုင်ရင်မှာမိရော။ အဲ့လိုမှာပြီး ကိုယ့်စီရောက်လာရင် တစ်ချို့ကလည်း စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရကြသလို တစ်ချို့ကျတော့လည်း ပုံထဲကအတိုင်းမဟုတ်လို့ တို့၊ Size မမှန်လို့တို့၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Satisfy မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဖက်ရှင်ပစ္စည်းလေးတွေကို Online ကနေဝယ်ယူရင်တော့ နောင်တရစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်နဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့နော်။
Clay နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Gold နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ နားကပ်လေးတွေ၊ Accessories လေးတွေကတော့ ဝယ်ထားလို့ Waste ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Outfit လေးတွေနဲ့ ကြိုက်သလို Styling လုပ်ကြည့်လို့ရသလို Classy ဖြစ်တဲ့၊ Chic ဖြစ်တဲ့ Look လေးတွေကိုလည်းရရှိစေမှာပါ။ ဒီလို Statement Earrings လေးတွေကိုဝတ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မျက်နှာ Shape နဲ့လိုက်တဲ့ Earrings Size နဲ့ Design လေးတွေကို သေချာရွေးချယ်ဖို့တော့လိုမယ်နော်။
Puffy Maxi Dresses
အရမ်းကြီး Effort ထုတ်ထားတဲ့ပုံမဖြစ်စေပဲ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ဖက်ရှင်ကျနေဖို့ဆိုရင်တော့ Maxi Dress လေးတွေကိုပဲ ရွေးဝတ်လိုက်ပါ။ Maxi Dress လေးတွေကိုမှ လက်ဖောင်းဖောင်းနဲ့ Puffy Sleeves လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းပြီး ငယ်ရွယ်တဲ့ဖက်ရှင် Look လေးကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ Online ကနေမှာရင်လည်း ဒီ Dress လေးတွေက Free Size အများစုဖြစ်တာမို့ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် ဝယ်လို့စိတ်တိုင်းကျစေမယ့် Dress လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
Oversized Collared Shirts
အချိန်တွေဘယ်လိုပြောင်းသွားသွား၊ ဖက်ရှင် Trend တွေဘယ်လိုခေတ်စားစား White Collared Shirt တွေကတော့ ဘယ်တော့မှရိုးသွားမှာမဟုတ်တဲ့ အဝတ်အစားပါ။ White Collared Shirt ကိုမှ ဘာလို့ ခပ်ပွပွ Oversized တွေကို Recommend ပေးချင်တာလဲဆိုရင် Sizing အတွက် ခေါင်းစားစရာလည်းမလိုသလို ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတိုင်းနဲ့လည်း လိုက်ဖက်လို့ပါ။
ရောင်စုံ Socks လေးတွေ၊ Long Socks လေးတွေကလည်း Fashionista တွေကိုယ်တိုင် ညွှန်းထားတဲ့ ဖက်ရှင် Accessory တစ်ခုဖြစ်တာမို့ Online ကဈေးဝယ်တဲ့အခါ ဒါလေးကိုမေ့ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်။ ဒီ ခြေအိတ်ရောင်စုံလေးတွေက သင်ဝတ်ထားတဲ့ Outfit ကိုပိုပြီး ထင်းသွားအောင် Support လုပ်ပေးနိုင်သလို Aesthetic Look ကိုလည်းရစေတယ်လေ။
Official Outlet Store တွေကပဲသွားဝယ်ဝယ်၊ Online ကပဲဝယ်ဝယ် အိတ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် Authentic Designer လက်ကိုင်အိတ်တွေက အကုန်အကျများတယ်ဆိုပေမယ့် ဝယ်ရတဲ့ ဈေးနဲ့တန်တဲ့ Luxury Feeling နဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိစေပါတယ်။ ပြီးတော့ High-End အိတ်တွေက ရေရှည်လည်းခံသလို အရည်အသွေးကောင်းပြီးသားမို့ အများကြားမှာလည်း သင့်ကိုမျက်နှာပွင့်လန်းစေမှာပါ။
ပုံစံကျနတဲ့ Blazers တွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ် Essential Outfit ထဲကတစ်ခုဖြစ်တာမို့ အနည်းဆုံးတစ်ထည်လောက်တော့ရှိထားသင့်တယ်နော်။ Formal ပုံစံလား၊ Casual ဝတ်မလား၊ ပွဲတက်အတွက်ပဲ ခြုံသွားမလား အားလုံးအဆင်ပြေနေစေမှာပါ။ Online မှာတွေ့ရတဲ့ Blazer လေးတွေဆိုရင်လည်း Affordable ဖြစ်သလို Well-Structured ဖြစ်ပြီး ပုံကျတာမို့ ဝယ်ဖို့ Worth ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းမဆန်တယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ်ဝတ်ကြည့်ရင် ကောင်လေးတွေနဲ့လည်း ဖက်ရှင်ကျတဲ့ အဝတ်အစားကာလာ (၅)ရောင်
ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်အကြောင်းတွေကိုပြောရင် အရောင်တွေအကြောင်းကိုလည်း ချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ အဝတ်အစားကာလာတွေက ဝတ်ဆင်သူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ၊ Emotion တွေနဲ့ Personality တွေကိုလည်း အများကြီးဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အရောင်တွေကိုကျ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အယူအဆတွေကြောင့် Sexist ကာလာလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရောင်တွေလည်းရှိတယ်။ ဥပမာ ပန်းရောင်တို့၊ ခရမ်းရောင်တို့ကို မိန်းမဆန်တဲ့ ကာလာတွေလို့ ယူဆထားကြတာမို့ ယောင်္ကျားလေးတွေအဲ့အရောင်ဝတ်ရင် နွဲ့တယ်တို့ Gay ဆန်တယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတာမျိုးတွေပေါ့။ တကယ်တော့ အဲ့လို Limitation တွေက မရှိသင့်တော့တဲ့ Idea တွေဖြစ်ပြီး လူတိုင်း မှာ ကျား/မ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူတို့နှစ်သက်ရာဖက်ရှင် နှစ်သက်တဲ့ ကာလာကို ရွေးချယ်ဝတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဖက်ရှင်မှာလည်း စည်းဘောင်တွေ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အခုဆို International Fashion Week တွေ၊ Fashion Runway တွေနဲ့ Fashionista တွေကပါ ဒီလို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ Genderless Fashion တွေကို ပိုပြီးပွဲထုတ်လာကြပါပြီ။ ပြောမယ့်သာ ပြောတာပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ကာလာတွေက Feminine ဆန်တယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းဝတ်ကြည့်ရင် ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့လည်း လိုက်ဖက်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘယ်အရောင်တွေလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်လိုက်တော့နော်။
လူတွေတော်တော်များများက ပန်းရောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မိန်းမအရောင်ကြီးဆိုပြီး ပိတ်ငြင်းကြတော့တာပဲ။ တကယ်တော့ ပန်းရောင်က ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့လည်းအသားဆောင်ပြီး ဖက်ရှင်ကျစေတဲ့ကာလာပါ။ အထူးသဖြင့် Spring နဲ့ Summer က ပန်းရောင်ဝတ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးအချိန်တွေပါ။
အသားရောင် (Beige) ကကောင်လေးတွေကို ဈေးကြီးတဲ့အသွင်ဖြစ်စေပြီး ပွဲတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Casual ထသွားထလာပဲဝတ်ဝတ်အဆင်ပြေတဲ့ ကာလာပါ။ ဖိနပ်လည်းသိပ်မရွေးတော့ Perfect ပဲပေါ့။ ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ Boyfriend Material ဖက်ရှင်မျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသားရောင်ကမေ့ထားလို့မဖြစ်ဘူးနော်။
ခရမ်းရောင်က မိန်းကလေးဆန်တယ်ထင်ရပေမယ့် ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့လည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ Smart ကျစေမှာပါ။ ခရမ်းရောင်ကို Formal ဆန်ဆန်မဝတ်ချင်ဘူးဆိုရင် Streetstyle/ Hypebeast Style Outfit ထဲကနေဝတ်ရင်လည်း မိမိုက်နေမှာနော်။
အဝါရောင်က ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို သယ်ဆောင်ပေးသလို ဝတ်တဲ့သူကိုလည်း Charming ဖြစ်စေတဲ့ကာလာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်မှာ အဝါရောင် T-Shirt (သို့) Sweatshirt လေးတစ်ထည်တော့ အနည်းဆုံးရှိထားသင့်တယ်နော်။ ရာသီဥတုပူပူ၊ အေးအေး အဝါရောင်လေးကလွင်လွင်လေးနဲ့အထာကျနေစေမှာပါ။
အေးအေးဆေးဆေး Minimalist Style လေးတွေကိုမှဝတ်တတ်တဲ့ ကောင်လေးတွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးက Turquoise စိမ်းပြာရောင်လေးပါ။ သူ့ကို Sporty ဆန်ဆန် Look လေးတွေနဲ့ ဝတ်ကြည့်ရင်လည်း ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ သူက မျက်စိအမြင်လည်းအေးသလို ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိတာကိုတော့ မငြင်းနိုင်ပါဘူးနော်။
#Feminine Colors for Guys
ယောက်ျားလေးတွေ လုံး၀ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ဖက်ရှင်အမှား (၆) မျိုး
ဖက်ရှင်ကျပြီး ကြည့်ကောင်းနေဖို့ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေအတွက်ပဲလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကြားထဲ သွားလာလှုပ်ရှား အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့သူတိုင်းအတွက် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ခန့်ညားသပ်ရပ်နေတာဖို့ဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အ၀တ်အစားကျကျနန၀တ်ဆင်ထားခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ first impression ကိုမြင့်တက်စေသလို အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရော ၊လူမှုပတ်၀န်းကျင်မှာပါ ကိုယ့်အပေါ် လူအများရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုတိုးစေတာမို့ ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင် အနေအထားတစ်ခုထိလေ့လာထားသင့်ပြီး ဆောင်သင့်တာဆောင် ရှောင်သင့်တာရှောင်ဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ လွဲမှားတတ်တဲ့ အ၀တ်အစားရွေးချယ်ပုံတချို့ကို သိရှိပြီး အရင်ကထက်ပိုစမတ်ကျကျ၀တ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ဖက်ရှင်အလွဲလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးမှာမို့ အစအဆုံးတစ်ချက်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
အင်္ကျီနဲ့ဘောင်းဘီကို Monochrome လို့ခေါ်တဲ့ အရောင်အနုအရင့်တွဲစပ်၀တ်ဆင်တာမျိုးက ကြည့်လို့အရမ်းအဆင်ပြေပေမယ့် အနုအရင့်မကွဲပြားတဲ့အရောင်နှစ်ခုကို အပေါ်အောက်တွဲ၀တ်ထားရင်တော့ ညအိပ်၀တ်စုံကြီး၀တ်ပြီး အပြင်ထွက်လာတာနဲ့တူသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီထက်ပိုဆိုးတာကတော့ ပန်းရောင်တို့ ၊ Pastel colorတို့လို အရောင်နုနုတွေကို အပေါ်အောက်တွဲ၀တ်တာမျိုး၊ Crazy Color တွေကိုအပေါ်အောက်တွဲ၀တ်တာမျိုးနဲ့ ကြောင်ကြောင်ကျားကျားဒီဇိုင်းတွေကို အပေါ်အောက်ဆင်တူ၀တ်တာမျိုးက သင့်ကိုတော်တော်ကြီးအကြည့်ရဆိုးစေမှာအမှန်ပါပဲ။
2.ခါးအရမ်းရှည်တဲ့ T Shirt များ၀တ်ဆင်ခြင်း
တချို့ကောင်လေးတွေ နိုင်ငံခြားကအဆိုတော်တွေ၀တ်သလိုမျိုး တီရှပ်ခါးရှည်ရှည်ကြီးတွေ၀တ်တာတွေ့ဖူးမှာပါ။ အဲဒီတီရှပ်ခါးရှည်ကြီးတွေက Celebrity တွေအနေနဲ့တော့ မီးရောင်အောက်နဲ့ စင်မြင့်ထက်မှာမို့ရော သူတို့ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှာမို့ရော ကြည့်လို့လှပေမယ့် အပြင်မှာထသွားထလာ၀တ်ထားတဲ့ သင့်ကိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစမတ်ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ယောက်ျားလေး‌တစ်ယောက်ဟာ ပိန်သည်ဖြစ်စေ ၀သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်ပြီး ကွက်တိကျတဲ့ အ၀တ်အစားကို၀တ်ထားရင် ကြည့်ရတာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့အလိုလိုကြည့်ကောင်းနေမှာပါ။ အခုလောလောဆယ် ဆိုဒ်ကြီးတာ၀ယ်‌ထားလိုက်မယ် နောက်ကျဝိတ်တက်လာရင်အတော်ပဲတို့ ၊ ဝိတ်ချမှာဆိုတော့ တစ်ဆိုဒ်လျှော့၀ယ်ထားလိုက်မယ် ခုတော့နည်းနည်းကြပ်တာပဲ၀တ်လိုက်မယ်တို့ဆိုပြီး စဉ်းစားရင်တော့ အဲအတွေးကိုချက်ချင်းပြင်လိုက်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ် Weight အတက်အကျကို ကြိုတွက်ချက်တာဟာ မှန်ဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းသလို မတော်တဲ့ဆိုဒ်တွေ၀တ်ဆင်ခြင်းကလည်း သင့်ကိုပိုပြီး ကြည့်ရဆိုးစေပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီး ခုခေတ်စားနေတဲ့ Oversized T shirt တွေနဲ့ ရိုးရိုးT Shirt တွေကို Size အကြီး၀ယ်တာနဲ့ cutting လုံး၀တခြားစီပဲဆိုတာကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မှမဟုတ်ပါဘူး ၊ ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မလိုအပ်ပဲ Accessories တွေအများကြီး စုပြုံ ၀တ်ဆင်ထားတာမျိုးက ကိုယ့်ကို ဖက်ရှင်အမြင်အားနည်းတယ်ဆိုတာ အလိုလိုဖော်ပြနေသလိုပါပဲ။
ကတ္တီပါဖိနပ်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးတစ်ခုတည်းသောအရာက ပုဆိုးပါ။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ကတ္တီပါဖိနပ်နဲ့ တွဲ၀တ်တာက တော်တော်လေးကိုးလိုးကန့်လန့်နိုင်သလို ၊ ကြည့်ရတာလည်း ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေစေမယ့်အတွဲအစပ်တစ်ခုဖြစ်မနေပါဘူး ။ Sneaker တွေ ရှုးဖိနပ်တွေမ၀တ်ချင်ရင်တောင်မှ ၊ Slider တို့ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်တို့ကို ပိုပြီးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ရိုးရိုးခြေညှပ်ဖိနပ်နဲ့တွဲ၀တ်ရင်တောင် တမျိုးကြီးဖြစ်နေမယ့်အခြေအနေမှာ ၊ ကတ္တီပါဖိနပ်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို တွဲ၀တ်တာကြီးကတော့ သင့်ရဲ့ဖက်ရှင်မကျမှုကို ကောင်းကောင်းကြီးမီးမောင်းထိုးပြသလိုပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အ၀တ်အစား၀ယ်ရာမှာ အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ ဘာစာတန်းတွေ ၊အမှတ်တံဆိပ်တွေမှမပါတဲ့ ပြောင်အ၀တ်အစားတွေပါပဲ။ ယုတ်စွအဆုံး သုံးလေးထည်လောက်ကိုပဲ ခဏခဏထပ်ခါတလဲလဲ၀တ်နေရင်တောင် စာတန်းနဲ့ရုပ်ပုံပါတဲ့အ၀တ်အစားတွေလောက်တော့ ဘေးကလူတွေကို သိသိသာသာကြီးသတိထားမိစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
#Do's & Don'ts
K Idol တွေလို အထာကျကျလှပစေမယ့် Outfit စတိုင်လ် (5) မျိုး
Idol တွေလို ဖက်ရှင်ကျစေဖို့
ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေ ၊ K Idol တွေရဲ့ ပရိသတ်တွေကို အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးအချက်တွေထဲမှာ သူတို့ရဲ့စမတ်ကျလှပပြီး ဘယ်တော့မှရိုးမသွားနိုင်တဲ့ ဖက်ရှင်တွေလည်းပါ၀င်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လာရင် သူတို့ရဲ့ အမာခံ fan တွေပေါ်မှာ trend တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အထိကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ သာဓကလည်းအများကြီးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုလည်း ကိုယ့်အားကျရတဲ့ K Idol တွေရဲ့အထာကျကျ ဖက်ရှင်စတိုင်လ်မျိုးလေးတွေကို အနည်းငယ် inspire လုပ်ပြီး K Idol ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်မျိုးကိုမှ ၀တ်ဆင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် လေ့လာလို့ကောင်းမယ့် အမျိုးသမီး K Idol ငါးဦးရဲ့ လိုက်၀တ်ဆင်ကြည့်ဖို့လွယ်တဲ့ ဖက်ရှင် Style အချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1.Jennie ( Blackpink )
အမြဲတမ်း Fashion ကျပြီး trendy ဖြစ်နေတတ်တဲ့ K Idol တစ်ယောက်ကို ပြပါဆိုရင် Jennie ကိုချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ သူမရဲ့ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်အများစုကလည်း ခြားနားတဲ့ taste နှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတတ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ Sporty နဲ့ Casual နဲ့ကိုပေါင်းစပ်ထားတာမျိုးပေါ့။
သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ရိုးရှင်းပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်မျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်တတ်သူမို့ Jennie ရဲ့ ဖက်ရှင်ကို အနီးစပ်ဆုံးတူအောင်၀တ်ဆင်မယ်ဆိုရင် အများကြီးအားထုတ်ဖို့မလိုပါဘူး ။ ခပ်ပွပွ Baggy Jean တစ်ထည်ကို Crop top အင်္ကျီလေးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီး ခပ်မိုက်မိုက် Funky Shoe တစ်ရံနဲ့ ပေါင်းစပ်၀တ်ဆင်လိုက်ရုံပါပဲ။
ခပ်နုနု Pastel အရောင်လေးတွေနဲ့ မိန်းမဆန်ဆန်လေး ၀တ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Nayeon ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို လေ့လာရမှာပါ။ အရောင်နုနုနဲ့ အလွှာထပ်လေးတွေပါတဲ့ အ၀တ်အစားပုံစံတွေကို အများဆုံးရွေးချယ်တတ်သူတဲ့ Nayeon ရဲ့ Style ကမိန်းကလေးဆန်ဆန်နူးညံ့ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
Nayeon လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေ ၀တ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ခြေအိတ်အဖြူရောင်လေးက မပါမဖြစ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အလွှာအထပ်လေးတွေပါတဲ့ Flowy Mini Skirt ထဲမှာ Graphic Tee ခပ်ပွပွတစ်ထည်ကိုထည့်၀တ်ပြီး Crossbody အိတ်လေးတစ်လုံးလွယ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Seulgi ကတော့ အမြဲတမ်းလိုလို ရင့်ကျက်ပြီး Classy ကျတဲ့ ဖက်ရှင်မျိုးကို ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် စမတ်ကျကျနဲ့ လှပပေါ်လွင်နေစေ‌မယ့် ပုံစံမျိုးမို့ ရုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ စမတ်ကျကျ၀တ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Seulgi ရဲ့ ဖက်ရှင် taste လေးကို အတုခိုးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Seulgi လို Classy ကျကျ ၀တ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရှပ်အင်္ကျီကွာလတီကောင်းကောင်းတစ်ထည်ကို ကိုယ့်ရဲ့ Mood ပေါ်မူတည်ပြီး သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Midi စကတ် ၊ Skinny Pant ၊ စတိုင်လ်ဘောင်းဘီလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်သလို တွဲဖက်၀တ်ဆင်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။
MOMO ကတော့ သူမအနေနဲ့ ဘာကိုပုံသေ၀တ်ရမယ် ၊ ဘာကိုတော့မ၀တ်ရဲဘူးဆိုတာမျိုးမရှိပဲ ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီး မတူကွဲပြားတဲ့ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုးကို ၀တ်ဆင်တတ်တဲ့ Idol လေးတစ်ယောက်ပါ။ သူမကိုကြည့်လိုက်တိုင်း တခါနဲ့တခါမတူညီတဲ့ ၀တ်စားပုံနဲ့ look အမျိုးမျိုးကို တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အမြဲတမ်း ပုံသေစတိုင်လ်မျိုးမရှိတတ်တဲ့ MOMO ရဲ့ ဖက်ရှင်ကို အတုခိုး၀တ်ဖို့ အနည်းငယ်ခဲယဉ်းတယ်ဆိုပေမယ့် သူမရဲ့ မြင်နေကျ ခပ်မိုက်မိုက် Look တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fitting ကျကျအပေါ်အင်္ကျီကို အောက်က Solid Color စကတ်၊ ဘောင်းဘီလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်၀တ်တတ်တဲ့ပုံစံကတော့ လိုက်၀တ်ဆင်ဖို့လည်းလွယ်သလို ကြည့်ရတာလည်း မိမိုက်နေမယ့်ပုံစံမျိုးပါ။ ဒါကိုမှ Chunky ဖြစ်တဲ့ Accessories တစ်မျိုးမျိုး ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်ရင်တော့ လုံး၀အထိစားပါပဲ ။
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ရိုးရှင်းတိကျပြီး အနုပညာဆန်ဆန် လှပနေတဲ့ ဖက်ရှင်ကို လေ့လာချင်ရင်တော့ IU ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ IU ရဲ့ look အများစုက K Drama ထဲကခုန်ထွက်လာသလားလို့ထင်ရလောက်အောင်ကို အမြဲတမ်း စမတ်ကျလှပနေတာမျိုးပါ။
IU ရဲ့ စတိုင်လ်မျိုး လိုက်ပြီး၀တ်ဆင်ဖို့ဆိုရင်တော့ classic ဆန်ဆန် boot တွေ ၊ ဒေါက်ဖိနပ်တွေကို ဒီကရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ထပ်ကုတ်‌လေးတွေ ၊ ခပ်ပါးပါး Blazer လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ရုံပါပဲ။ စကတ်ကြပ်ကြပ်လေးတွေနဲ့ Skinny Pant လေးတွေ၊ Stocking လေးတွေကလည်း IU ဖက်ရှင်ရဲ့အသက်ပါပဲ။
တင်းနစ်စကတ်အတိုလို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ Pleated mini skirt လေးတွေဟာ 70s ခေတ်ကာလမှာ အရမ်းကိုခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မိန်းမသားဆန်မှုနဲ့ နုပျိုတက်ကြွမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ဖော်ညွှန်းတဲ့ Outfit တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့‌ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်းကို ဖော်ပြရာကျတဲ့အပြင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လိုသလိုစတိုင်လ်မျိုးစုံပေါင်းစပ်ဖန်တီးနိုင်တာကလည်း Pleated mini skirt လေးတွေရဲ့ အားသာချက်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ Vintage Vibe တွေ Aesthetic ဆန်ဆန်ဖက်ရှင်တွေကို ပိုပြီးရွေးချယ်လာကြတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေကြားမှာ စကတ်တိုတိုကားကားလေးတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက 2021 ခုနှစ်ထဲမှာရော နောက်ထပ်ပြီး တစ်ကျော့ပြန်ခေတ်စားလာဦးမလားဆိုတာကတော့ စိတ်၀င်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်ရဦးမယ့်အချက်ပါပဲ။
စကတ်အတိုအကားလေးတွေကို Vest လက်ပြတ်လေးတွေနဲ့တွဲ၀တ်တဲ့ဖက်ရှင်က ခုလိုဆောင်းရာသီနဲ့လည်း အထူးသင့်တော်သလို အအေးလျော့သွားတဲ့ချိန်မှာလည်း အရမ်းကြီးစိတ်အိုက်နေစေမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ရဲ့ အရောင်ရွေးချယ်တွဲစပ်တတ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ နုနုငယ်ငယ် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကျောင်းသူကောင်မလေးပုံစံကစလို့ ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်မလေးစတိုင်လ်အထိ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီး၀တ်ဆင်လို့ရပါတယ်။
2. Shirt under sweater လေးနဲ့လည်း လိုက်ဖက်ညီ
တင်းနစ်စကတ်အကားလေးတွေကိုမှ ခုခေတ်စားနေတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီပေါ် ကဆွယ်တာလက်ရှည်ထပ်၀တ်တဲ့ ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဆိုရင်လည်း လူ‌ကြားထဲမှာ ပေါ်လွင်လှပသလို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ ခပ်ချေ‌ချေဖက်ရှင်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီး အပေါ်ထပ်ဆွယ်တာကို အထူအပါး ၊အပွ ၊အကြပ် စသဖြင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သလို ၊ အရောင်တွဲစပ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး smart ကျကျကောင်မလေး ပုံစံကနေ Gothic ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်မျိုးအထိလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။
3. Pullover နဲ့ Mini Skirt အတွဲအစပ်လေး
စကတ်အကားလေးတွေကို အပေါ်ထပ်ဆွယ်တာတွေ၊ Pullover တွေနဲ့ Hoodie တွေ တွဲဖက်၀တ်ဆင်တဲ့ပုံစံကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အသွင်ကိုရော ချစ်စရာကောင်းပြီး နုပျိုတဲ့အသွင်ကိုပါဆောင်စေမယ့် ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖက်ရှင်မျိုးကို ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်က လူငယ်ပိုင်းမိန်းကလေးတွေ အများစု၀တ်ဆင်ကြပြီး ခုနောက်ပိုင်း ထိုင်းမလေးတွေကြားထဲမှာပါ ခေတ်စားနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Pleated Mini Skirt ကို တီရှပ်ခပ်ပွပွလေးတွေ၊ Oversized T shirt လေးတွေနဲ့ Crop top လေးတွေ တွဲဖက်၀တ်ဆင်တာကလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး မိန်းကလေးဆန်တဲ့ ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး မိန်းကလေးဆန်ချင်ရင်တော့ အဖြူ နဲ့ ခပ်နုနု pastel color လေးတွေကို တွဲစပ်နိုင်ပြီး ၊ အလန်းစား E Girl စတိုင်လ်မျိုးဖန်တီးချင်ရင်တော့ အနက်နဲ့အရောင်ခပ်ရင့်ရင့်တီရှပ်တွေ ၊ စတစ်ကာအမိုက်စားပါတဲ့ တီရှပ်တွေကိုမှ စကတ်အကွက် ၊ Accessories လေးတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး ဖန်တီးလို့ရပါ‌တယ်။
5.Girly ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ လှပနေမယ့်ပုံစံလေး
မိန်းကလေးအဆန်ဆုံးနဲ့ အနူးညံ့ဆုံးလေး လှချင်တယ် ၊ တအားကြီးလုပ်ယူထားတဲ့ပုံလည်းမပေါက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ floral crop-top လေးတွေ ၊အရောင်နုနု အပေါ်ထပ်လေးတွေနဲ့ Puffy Sleeve အင်္ကျီလေးတွေကို စကတ်အကားလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး နူးညံ့တဲ့မိန်းမဆန်ဆန် ဖက်ရှင်ကို အလွယ်တကူပုံဖော်နိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းရှိရင်းစွဲထက်ပိုပြီး နုပျိုတဲ့ပုံပေါက်စေမှာပါ။
ဘောင်းဘီတိုလေးတွေကို ကြည့်ရမရိုင်းပဲ အထာကျနေအောင် ဘယ်လိုဝတ်မလဲ
ပြောလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အတိုလေးတွေက ပိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းစေတာအမှန်ပဲ။ ကိုယ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံလို ရာသီဥတုမှာ ဖရိုဖရဲရှည်ရှည်လျားလျားတွေ တစ်ချိန်လုံး ဝတ်ထားဖို့က သိပ်တော့ အဆင်မပြေလှဘူးလေနော်။ အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုအတွက်ဆို Short လေးတွေက ခန္ဒာကိုယ်အချိူးအစားကို ဘယ်လိုဆန့်ထုတ်ပေးလဲဆိုတာ ပိုသိမှာ။ ဒါပေမယ့် အတိုတွေ ဝတ်လို့ အိမ်က ဆူနေပြီလား။ လူကြီးတွေရှေ့မှာ အမြင်မရိုင်းပဲ အဆင့်အတန်းရှိရှိလှနိုင်ဖို့ ဒီလို Outfit Idea လေးတွေနဲ့ သက်သေပြလိုက်ရအောင်။
ခပ်ပွပွ လီနင်သား ဘောင်းဘီတိုလေးတွေကို Blazer လေးတွေနဲ့ တွဲဝတ်ကြည့်ပါ။ ပုံမှန် Suit တွေထက် ပိုပြီး လူငယ်ဆန်စေတဲ့အပြင် Classic လည်းဖြစ်တာမို့ အတိုဝတ်ထားလည်း Smart ဖြစ်နေရောပဲ။ အောက်ကနေ Sneaker အဖြုလေးဖြစ်ဖြစ်၊ Heel လေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်သဘောကျတဲ့ပုံစံ ပြန်တွဲစပ်နိုင်တယ်နော်။
အောက်က အတိုလေးဝတ်ထားဖို့ အပေါ်ကနေ ဒီလို လည်ပင်းအပိတ် လည်ရှည်အင်္ကျီလေးနဲ့ ပြန်ထိန်းလိုက်ပါ။ ကြည့်ရမရိုင်းတဲ့အပြင် ခပ်မိုက်မိုက် အထာလည်းဖြစ်စေတာမို့ Try ကြည့်သင့်တဲ့ အတွဲအစပ်လေးပါ။
ဂျင်းပြာနဲ့ အဖြုရောင် တီရှပ်ဆိုတာက ဘယ်တော့မှ မရိုးသွား၊ မဟောင်းသွားမယ့် Outfit Look လေးပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ် သိပ်ပြီး အလှမပြင်ချင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ရှိုးထုတ်စရာမလိုပဲ အမိုက်စားဖြစ်နေစေမှာပါ။
ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့ Floral Shirt ကနေ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း White Shirt တွေနဲ့ပါ တွဲစပ်နိုင်တယ်နော်။ ကြည့်လိုက်တိုင်း ဈေးကြီးတဲ့ပုံစံပေါက်စေတဲ့အပြင် အချိန်အခါတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်လို့ ဘာဝတ်ရမလဲ ခေါင်းကိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
မိန်းကလေးတွေအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုတာ လှပဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်သာမကဘဲ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့အတွက်ပါ ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆတွေ ရှုမြင်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားပေမယ့်လည်း အမြဲတမ်း မပြောင်းလဲပဲရှိနေမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်ရွေးချယ်၀တ်ဆင်လိုက်တဲ့ဖက်ရှင်ဟာ ကိုယ့်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့အတွဲအစပ်ဖြစ်နေဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေအတွက် ဖက်ရှင်ကျလှပဖို့ စဉ်းစားရာမှာ အရေးပါဆုံးအခန်းကဏ္ဍကနေပါ၀င်နေမယ့် ဖက်ရှင်ကျကျတွဲစပ်၀တ်ဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်သင့်တော်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် အာရှတစ်လွှားကမိန်းကလေးတွေကြားမှာ ရွေးချယ်မှုများနေတဲ့ ရိုးရှင်းပေါ်လွင်တဲ့ ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်လေးတွေကို ရွေးချယ်စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Midi Skirt နဲ့ T shirt
Midi Skirt နဲ့ တီရှပ်အတွဲအစပ်ဟာ ရိုးစင်းသလောက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဖက်ရှင်ကျစေတဲ့ ချစ်စရာအတွဲအစပ်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ထသွားထလာအတွက်လည်းအဆင်ပြေသလို ရုံးသွားကျောင်းသွားအတွက်ပါ သင့်လျော်ပြီး လူငယ်ဆန်ဆန် လှပတက်ကြွတဲ့အသွင်ကိုရရှိစေမှာပါ။ ရာသီဥတုအလိုက် အပေါ်ကတီရှပ်အစား pullover , sweater လေးတွေနဲ့လည်း အလိုရှိသလို ပေါင်းစပ်၀တ်ဆင်နိုင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ type ကို ပိုပေါ်လွင်စေပါလိမ့်မယ်။
Sweater အောက်က Shirt
ခုတလောခေတ်စားနေတဲ့ pullover တို့ ၊ဆွယ်တာတို့ ၊Vest တို့အောက်မှာ shirtအင်္ကျီကို ကော်လာလေးအပြင်ထုတ်ပြီး၀တ်တဲ့ဖက်ရှင်ကို တော်တော်များများသတိထားမိကြမှာပါ။ အဲဒီလို shirt နဲ့pullover ဖက်ရှင်လေးမှာမှ Tennis skirtလို့ခေါ်တဲ့ Pleated mini skirt လေးကိုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Vintage ဆန်ဆန်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုးရှင်းပေါ်လွင်တဲ့ ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်လေးကိုရနိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတုပူလို့နှစ်ထပ်မ၀တ်နိုင်ဘူးဆိုရင် တချို့ online shop တွေမှာရောင်းနေတဲ့ fake shirt collar လေးတွေရှာ၀ယ်ပြီး ၀တ်ဆင်လို့ရပါတယ်။
Crop Top နဲ့ Jean Pant
ကိုယ့်ဘော်ဒီအချိုးအစားနဲ့ပတ်သက်လို့ သိပ်စိတ်တိုင်းမကျဘူးဆိုရင်တောင်မှ ယုံကြည်မှုရှိရှိ လှပနေစေမယ့် အတွဲအစပ်ကတော့ Puffy ဖြစ်တဲ့ Crop top အင်္ကျီမျိုးလေးတွေနဲ့ Jean pant တွေကို ပေါင်းစပ်၀တ်ဆင်တဲ့ဖက်ရှင်မျိုးပါပဲ။Jean pant ကိုတော့ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် slim fit ကစလို့ အောက်ကား wide leg pant တွေအထိ သင့်တော်သလို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ယုံကြည်မှူအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Crop top ခပ်ကြပ်ကြပ်လေးတွေနဲ့ အောက်ကားဘောင်းဘီလေးတွေ တွဲ၀တ်နိုင်ပါတယ်။ နုပျိုမှုကော smart ကျလှပမှုကြားမှာပါ လိုသလို ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ ဖက်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့် သင်တန်းသွား၊ကျောင်းသွားကစလို့ ရုံးတက် နဲ့ home party တွေအထိ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၀တ်ဆင်နိုင်မယ့် ဖက်ရှင်မျိုးပါ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖက်ရှင်ကို၀တ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Cami dress လေးတွေကို အောက်က လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်နုနုအင်္ကျီလေးတွေခံပြီး ၀တ်ဆင်တဲ့ပုံစံကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ပိုပြီးမိန်းကလေးဆန်ဆန် နုပျိုတဲ့အသွင်ကိုရချင်ရင်တော့ အပေါ်ထပ်ဂါ၀န်ကို floral printed လေးတွေကစလို့ pastel color ခပ်နုနုလေးတွေအထိရွေးချယ်နိုင်ပြီး သိပ်မိန်းကလေးဆန်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ အနက်ရောင်နဲ့နက်ပြာရောင်လို ခပ်ရင့်ရင့်အရောင်တွေသုံးပြီး နှစ်သက်သလို တွဲဖက်၀တ်ဆင်နိုင်မှာပါ။
Crop top နဲ့ Mini Skirt
Crop top လေးတွေကို mini skirt အကြပ်လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်၀တ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ လူငယ်တွေနဲ့ပိုပြီးသင့်တော်သလို နုပျိုမှုနဲ့ မိန်းမသားဆန်မှုတွေကို ပေါင်းစပ်ဖော်ညွှန်းနေစေမယ့် ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Crop top ကိုမှ လက်တို လက်ရှည်အထူအပါး သင့်တော်သလိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး အရောင်ကိုလည်း ကိုယ်ကျွမ်းကျင်သလို တွဲစပ်ကစားလို့ရပါတယ်။ အဲဒီထက်ပိုပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ပုံမျိုးလေးလည်းပေါက်ချင်တယ် ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးအပေါ်ထပ်လေးနဲ့လည်း၀တ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆွယ်တာအပါးလေးတွေ Cardigan အပါးလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်နိုင်ပါသေးတယ်။
Crop Top နဲ့တွဲဝတ်လို့ အလိုက်ဆုံး Pants နဲ့ Skirt ဖက်ရှင်အမိုက်စားတွေ
ဒီအတွဲအစပ်တွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားဘူး
မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ Closet ထဲမှာ Crop Top လေးတွေကတော့ အနည်းနဲ့ အများရှိကြမှာပါ။ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ Essential Clothes တွေထဲမှာ Crop Top တွေကလည်း မရှိမဖြစ်ပါဝင်တယ်လေ။ Crop Top လေးတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတယ်။ နေရာအချိန်မရွေးလည်း ဝတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်လေ။ အခုခေတ်ရေစီး Trend အရလည်း Crop Top လေးတွေက Never Go Out of Style ဖြစ်နေတာမို့ အမိုက်ဆုံးဖက်ရှင်တွေတွဲဖက်တတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်နော်။ Crop Top လေးတွေက Jeans၊ Pants၊ Skirt တွေတော်တော်များများနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Crop Top ကို ကိုယ့် Style နဲ့ ကိုယ်အထာကျကျ ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ Pants၊ Skirt အတွဲအဖက်လေးတွေကိုတော့ ဦးစားပေးရွေးချယ်ကြည့်တယ်နော်။
ကဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Crop Top နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး Pants နဲ့ Skirt တွေက ဘယ်ဟာတွေဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်။
Crop Top and Wide Leg Jeans
Crop Top နဲ့အလိုက်ဆုံး Jeans တွေက ဘယ် Jeans တွေလဲလို့ဆိုရင် အဖျားကို ကျယ်သွားတဲ့ Wide Leg Jeans တွေကိုပဲညွှန်းရမှာပါ။ ဒီ အတွဲအဖက်က ဘယ်လိုအသားအရေပိုင်ရှင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လို Body Shape နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လို နေရာပဲသွားသွားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး Style ကျနေစေမယ့် အတွဲအစပ်လေးမို့လို့ပါ။ Wide Leg Jeans လေးတွေက ဘယ်လို Crop Top မျိုးနဲ့ဝတ်ဝတ်ဖက်ရှင်ကျပြီး Style ကိုလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ကြည့်လို့ရတယ်လေ။
Crop Top and Mini Skirts
Mini Skirt လေးတွေက ဘယ်သူဝတ်ဝတ် Instagram/TikTok Girl လေးတွေလို ချစ်စရာကောင်းသွားစေပါတယ်။ Crop Top တွေကို Mini Skirt လေးတွေနဲ့ တွဲဝတ်လိုက်တဲ့အခါ Casual ဆန်ဆန်လေးမိုက်နေစေသလို အခုခေတ်စားနေတဲ့ Aesthetic Vibe ကိုလည်းပေးနိုင်တယ်လေ။ ဒီလို Look လေးကိုဆိုရင် 90's Shoulder Bag လေးနဲ့ Headbands လေးတပ်လိုက်ရင် လုံးဝ Artsy Girl လေးပဲနော်။
Crop Top and Suits
Crop Top ကို Casual Style မဟုတ်ပဲ နည်းနည်းဆန်းဆန်းပြားပြားလေးဖြစ်အောင်ဝတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အမိုက်စား Oversize Suit လေးတွေနဲ့သာ တွဲဝတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလိုပုံစံလေးက ပွဲနေပွဲထိုင်တွေ၊ အခမ်းအနားတွေအထိဝတ်ဆင်လို့တင့်တယ်ပြီး Fashion Week တွေမှာ Fashionista တွေဝတ်လေ့ရှိတဲ့ Trend လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ကာလာကိုလည်း အဖြူအမည်းကရိုးတယ်ဆိုရင် Nude နဲ့ Pastel ကာလာလေးတွေဆိုရင်လည်း မိုက်ပါတယ်။
Crop Top and Slip Midi Skirts
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အသွင်ဖြစ်သွားဖို့က Crop Top ကို Slip Midi Skirt လွင့်လွင့်လေးတွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်နော်။ ခရီးသွားတဲ့ အခါတွေ၊ Brunch Date တွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Hang Out လုပ်တဲ့အခါ ဒီ Slip Midi Skirt လေးတွေကို Accessory လေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးဆန်ဆန်လေးတွဲဖက်ကြည့်လိုက်နော်။
မိန်းကလေးဆန်တာလည်း မကြိုက်ဘူး။ Sporty ဆန်ဆန် Cozy ဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေမှ ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Track Pants ကထိပ်ဆုံးက ရွေးချယ်ရမယ့် Pants ပါ။ အခုခေတ်စားနေတဲ့ Hyped Streetwear (ဒါမှမဟုတ်) Sport Casual Style မျိုး ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အပေါ်က Strap Crop Top ၊Cropped Hoodie လေးတွေကို အောက်က Track Pants လေးဝတ်ပြီး Sneaker လေးစီးလိုက်ရင် Look ကလုံးဝ Perfect ပဲ။
အခုနောက်ပိုင်း Online Shopping တွေနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် Uptown Girl လေးတွေကို ဒီလို Crop Top Set လေးတွေနဲ့ တွေ့ ရမှာပါ။ ဒီလို Crop Top နဲ့ Skirt Set လေးတွေက ကျန်တဲ့ Outfit တွေလို Matching လုပ်ဖို့လည်းခေါင်းစားစရာမလိုသလို ကိုရီယားမလေးတွေလို ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်လေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေစေပါတယ်။
#Crop Top Outfits